PP zazenziwe Bags
Isinikezeli Shopping Bag
Mining YOKUHLOLA PRODUCT
Ingcamango inkonzo yethu design, ekwenzeni high, INKXASO 24HOURS. amava ebibekiwe, abasebenzi abaqeqeshiweyo kunye ukusebenza aphezulu isiseko kunye nesiqinisekiso inkonzo yethu catering epheleleyo.
Sinako ukuyila iingxowa ngokwendlela bume imfuneko kunye nokusetyenziswa umthengi kwakunye ezinye iinjongo ezithile.
Standard loMgangatho - Ngokusekelwe kumava ethu ngamaxesha ababeyiqwebile ziphuhliswe ngakumbi nemveliso, sinako ukuvelisa iingxowa phantse yonke imigangatho zobulunga njengoko ASTM, ISO, kunye UN, njalo njalo,
Umgangatho Control System - Thina nenkqubo yolawulo lomgangatho epheleleyo ukuqinisekisa iimveliso zethu ukwanelisa imfuneko sakho. Le nkqubo ilandela kwaye ulawula yonke ikhosi lwemveliso, likuthethayo iimpazamo kunokwenzeka asombulule naziphi na iingxaki ngexesha. Uqinisekisa ukuba wonke ikhonkco kwi kwikhonkco imveliso ithobelana nemfuno kweengxowa ugqibile.
Umgangatho Test kunye nokuhlola - We utywala iingxowa nokulawula ubulunga ngokuhambisana nemigangatho abathengi-ezifunekayo. abasebenzi bethu ethembekileyo zobungcali wayeza ukuvavanya imveliso yonke imihla yonke ikhonkco ephambili kwinkqubo imveliso uze uvavanye iingxowa ogqityiweyo ukuba ukwanelisa iimfuno zakho. Ngaphezulu, zonke iibhegi zethu izicelo iimvavanyo iilebhu yobungcali e Melika, eYurophu Australia ngokwesicelo sakho.
iiyure 24 INKXASO CHAT LIVE
Besiya ukugcina ingxoxo live imini yonke, ivele ukuphendula nayiphi na imibuzo yakho.
KwiSebe lethu Sales athembisa ukuba aphendule kwisithuba seeyure ezingama-24 ukusa mbuzo unzima.
ISebe yethu Imveliso liya eyiyo ukusombulula nawuphi na umbuzo kunokwenzeka zobugcisa ezingxoweni imveliso kunye nonikezelo waneliswe ngexesha elifanelekileyo.
ISebe wethu Umsebenzi uya kunika iingcebiso eneenkcukacha impahla ezithunyelwe kwisithuba seeyure ezingama-24 yaye ngokukhawuleza kummisa izisombululo ezifanelekileyo kwimibuzo zothutho ehlobene.
No. 199, IXINHUA Road, Shijiazhuang, 050000, Hebei, China